Testosterone (Tijaabada) ugu Fiican Warshada soo saaraha budada ah
AASraw waxay bixisaa noocyo ka mid ah budada esters testosterone oo leh sahay deggan, waxaan u rari karnaa cayriin steroid anabolic adduunka oo dhan, gaar ahaan USA, Europe, adeegga dib-u-celinta ayaa si fiican u shaqeeya oo waa nooc ka mid ah bixinta gudaha, aad u ammaan ah. Marka lagu daro, nidaamka guud waxaa lagu taageeri karaa qiimaha ugu tartanka badan.
Kala hadal AASraw Hadda
Iibso budada Testosterone
Weydii Quote Degdeg ah
Tijaabi budada Prop (57-85-2) -COA
Tijaabi E budada (315-37-7) -COA
Tijaabi Deca Powder (5721-91-5) -COA
Tijaabi budada Cyp (58-20-8) -COA
Tijaabi Iso budada (15262-86-9) -COA
1. Testosterone iyo Taariikhda Jirdhiska
2. Waa maxay Testosterone iyo sidee loo soo saaraa?
3. Waa maxay Heerarka Testosterone ee Caafimaadka leh?
4. Steroids iyo Testosterone ma isku shay?
5. Yaa u Baahan Daaweynta Testosterone?
6. Maxay jidh-dhisayaashu u door bidaan cirbadaha Testosterone?
7. Waa maxay Esters-ka ugu caansan ee Testosterone-ka la isku duro?
8. Sidee Loo Heli Karaa Testosterone Esters-ka Ugu Wanaagsan ee Jirdhiska?
Waa maxay Doorka Kala Duwan ee Testosterone Esters ee Jirdhiska?
Testosterone waa hoormoonka steroid si dabiici ah u dhaca ee jirka bini'aadamka. Hormoonka testosterone ayaa looga baahan yahay horumarinta jireed ee jidhka labka ah oo uu leeyahay hawlo kale oo dhowr ah, taas oo keentay in loo isticmaalo sida steroid anabolic by bodybuilders iyo ciyaartoyda.
Testosterone waa hoormoonka steroid ee jidhka bini'aadamka iyo da'da, heerka testosterone ee jidhku wuxuu bilaabaa inuu hoos u dhaco. Hoos u dhacan waxaa weheliya dhowr waxyeelooyin, sida timaha oo daata, luminta cufnaanta murqaha, iyo hoos u dhaca guud ee awoodda maskaxda iyo jidhka. Hormoonka steroids testosterone ayaa muhiim u ah kuwan jidhka ku jira, iyo in xaqiiqadu ay tahay waxa dhabta ah ee keenay isticmaalka testosterone exogenous sida daaweynta testosterone ee meesha ugu horeysa.
Sanadkii 1899, Dr. Brown-Sequard waxa uu sameeyay Elixir of Life ee ragga kaas oo ka samaysan dhiig, shahwo, iyo dheecaan xiniinyaha ah oo laga soo qaaday eeyaha iyo doofaarka guinea. Tani waxay u ekaan kartaa wax lala yaabo marka la eego horumarka caafimaad ee maanta laakiin dib u 1899-kii, tani waxay ahayd daahfur hor leh. Dr. Brown-Sequard ayaa isku tijaabiyey isku-dhafkan naftiisa, isaga oo xusay horumar weyn oo ku yimid guud ahaan caafimaadkiisa iyo adkaysigiisa. Sida ereyga Dr. Brown-Sequard ee guusha uu la yeeshay elixir-ku-saleysan testosterone-ku-saleysnaanta, dhakhaatiir badan oo badan ayaa bilaabay isticmaalka elixir. Ugu dambeyntii, waxaa qoray in ka badan 12,000 oo dhakhaatiir ah, sidaas darteed, waddada u xaareysa isticmaalka testosterone.
Iyadoo Dr. Brown-Sequard's concoction ahaa guul ay sabab u tahay saamaynta testosterone steroid hormone, testosterone dhabta ah synthetic lama horumariyo ilaa 1935, ee Germany. Isticmaalka ugu weyn ee testosterone synthetic wuxuu ahaa in lagu daweeyo niyad-jabka waana taas waxa loo isticmaali jiray, ilaa 1954-kii Olombikada. Dhiirigelinta ugu weyn ee si xun u isticmaalka lama yaqaan, laakiin waxay ahayd 1954 Olombikada in ciyaartoydu ay bilaabeen inay ku xad-gudbaan testosterone sida steroid anabolic, si loo helo waxqabad jireed oo wanaagsan.
Inkasta oo si xun u isticmaalka testosterone synthetic uu bilaabmay 1954, waxay ku koobnayd ciyaartoyda ilaa 1980-yadii markii isticmaalka testosterone sida steroid anabolic uu ku faafay dadweynaha guud sidoo kale. Waqtigaan, iyo ilaa dhawaan, isticmaalka testosterone ayaa inta badan ahaa ragga aan ciyaartoyda ahayn ee muuqaalkooda, halkii ay ka ahaan lahaayeen waxqabadkooda jireed. Dadweynaha guud waxay isticmaalaan testosterone ama steroids si ay u hagaajiyaan cufankooda, waxayna u muuqdaan kuwo ka sii weyn oo ka weyn halkii ay si fiican u qaban lahaayeen ciyaaraha.
Dadweynaha guud waxay ogaadeen horumar la taaban karo oo ku yimid waxqabadkooda jireed ee testosterone exogenous. Waxay la kulmeen cufnaanta murqaha caatada ah oo soo roonaaday, oo leh xanuunka murqaha oo hoos u dhacay jimicsiga ka dib iyo guud ahaan soo kabashada muddada soo kabashada. Dhammaan faa'iidooyinkaas waxay keeneen isticmaalka korodhka testosterone sida steroid anabolic by ciyaartoyda iyo kuwa jir-dhisayaasha.
Isticmaalka korodhka testosterone exogenous waxay keentay in Congress-ka daabaco Xeerka Anabolic Steroid Act ee 1990 kaas oo aqoonsaday steroids anabolic sida fasalka daroogada iyaga oo ku daray liiska walxaha la xakameeyey.
Testosterone waa hoormoon steroid ah oo laga helo labadaba, ragga iyo dumarka leh heerarka sare ee ragga, halkii dumarka. Waa hormoonka jinsiga ee ragga oo mas'uul ka ah horumarinta sifooyinka jinsiga ee ragga. Waxa ugu horrayn lagu soo saaray xiniinyaha, hoormoonkan isteeroodh waxa uu ka samaysan yahay kolestarool. Ugu weyn isha testosterone Labka iyo dheddigga way ka duwan yihiin sida dheddigga inta badan waxay ku tiirsan yihiin qanjidhada adrenal iyo unugyada durugsan ee isku dhafka testosterone halka ay ugu horrayn ku abuurmaan xiniinyaha ragga.
Isku-dubarid testosterone, oo ah steroid ka tirsan kooxda androstane, waxay ku xiran tahay kolestaroolka iyo waxqabadka unugyada Leydig ee xiniinyaha. Marka la farsameeyo, waxaa dhiigga lagu qaadaa galmo-hormone-binding globulin (SHBG) ka dib marka la isticmaalo, waxaa loo qaadaa beerka si loogu jajabiyo dheef-shiid kiimikaad ee firfircoon.
Celceliska lab ee caafimaad qaba waa inuu lahaadaa heerar testosterone oo u dhexeeya 264 ng/dl ilaa 916 ng/dl. Kala duwanaanshahan ayaa kaliya lagu dabaqi karaa ragga aan buurnayn ee da'doodu u dhaxayso 19 ilaa 39 sano, iyo celceliska heerarka testosterone celcelis ahaan 630 ng/dl. Out of this, kaliya 25 boqolkiiba waa dhab testosterone firfircoon iyo agagaarka 2 boqolkiiba 3 boqolkiiba waa testosterone free.
Testosterone waxaa lagu qiyaasaa iyadoo la adeegsanayo habka Vermeulen ee la beddelay, halkaasoo kaliya testosterone ee ku xiran SHBG la cabbiro. Waxa kale oo ay cabbirtaa testosterone-ka oo si daciif ah ugu xidhan albumin-ka dhiigga laakiin ma cabbiro testosterone-ka bilaashka ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in kala duwanaanshahan tixraaca ee heerarka testosterone ay muddo dheer ku murmeen dhakhaatiirta, iyada oo cabashooyinka ugu weyni ay yihiin dhammaadka hoose ee qiyaasta. Dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin in 294 ng / dl uu aad u hooseeyo oo loola jeedo hypogonadism ama heerarka testosterone hooseeya, halkii ay noqon lahaayeen qiime caadi ah. Taa baddalkeeda, waxay soo jeedinayaan isticmaalka 350 ng/dl sida qiimaha goynta hoose si loo sameeyo cabbirka tixraaca mid sax ah. Si kastaba ha ahaatee, kani maaha mid si weyn loo aqbalay qiimaha goynta oo goynta rasmiga ah ayaa weli ah 294 ng/dl inkasta oo qaar ka mid ah cosbitaalada gaarka loo leeyahay ay u qaadan karaan 350 ng/dl goyntooda.
Dhinac kale oo ay tahay in la tixgeliyo hubinta heerarka testosterone waa in hoormoonka steroid uu ku dhaco isbeddello maalintii oo dhan, taasoo la macno ah in ay aad ugu badan tahay in qiyamka la qiyaasay subaxdii ay aad uga duwan yihiin qiyamka la qiyaasay fiidkii. Qiimaha subaxdii ayaa aad u sarreeya marka heerarka testosterone hoos u dhaco maalintii oo dhan.
Heerarka testosterone waxay sidoo kale ku xiran yihiin sii deynta gonadotropin-sii daynta hoormoonka (GnRH) kaas oo laftiisa loo sii daayo si qaafiya, celcelis ahaan, dhowr saacadood kasta. Tan waxaa lagu tirin karaa isbeddelka heerarka testosterone maalintii oo dhan.
Testosterone iyo steroids maaha wax isku mid ah in kastoo, ay leeyihiin awood isku mid ah, ilaa xad. Waa muhiim in la dhex galo waxa steroids anabolic yihiin ka hor inta aan la barbar dhigin testosterone.
Anabolic-androgenic steroids waa qaybo kala duwan oo leh saameyn isku mid ah sida hormoonka jinsiga ee dabiiciga ah, testosterone. Dhab ahaantii, waxay yihiin qaababka synthetic ee testosterone. steroids Anabolic waxay noqon kartaa mid ka mid ah esters testosterone, horudhac testosterone, ama noocyo kale oo testosterone ah, marka la eego in dhammaantood ay si sax ah u shaqeeyaan sida hormoonka dabiiciga ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in steroids anabolic ay ka duwan tahay corticosteroids sida prednisone oo loo isticmaalo daaweynta cudurrada caafimaadka qaarkood. Steroids anabolic waxaa inta badan u qoraa dhakhaatiirta loogu talagalay testosterone hooseeya, maadaama ay si isku mid ah u shaqeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, noocyadan steroids ayaa sidoo kale si caadi ah loogu xadgudbay oo si xun loo isticmaalo ciyaartoyda iyo kuwa jir-dhisayaasha si ay si degdeg ah u kordhiyaan murqaha.
Steroids anabolic waxay ku xidhaan receptor androgen ee maskaxda. Testosterone waxay ku xidhan tahay soo-dhoweyntan sida caadiga ah si ay u soo saarto saameynteeda, markaa, sharraxaysa awoodda steroids anabolic 'si ay ugu dhaqmaan hab la mid ah testosterone. Anabolic steroids ayaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo kala duwan sida irbado, kiniinno, pellets la rakibay, jel, iyo kareemyo. Sidoo kale, waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah steroids anabolic, kuwaas oo dhammaantood loo isticmaalo in lagu daaweeyo xanuunada caafimaadka ee la xidhiidha heerarka testosterone hooseeya.
Testosterone waa hoormoonka jinsiga ee ragga kaas oo si dabiici ah loogu soo saaro jirka. The testosterone esters, kuwaas oo esters of testosterone dabiiciga ah ama testosterone synthetic yihiin inta badan loo isticmaalo steroids anabolic ee daaweynta heerarka testosterone hooseeyo. Tusaalooyinka esters testosterone waxaa ka mid ah testosterone enanthate, testosterone cypionate, testosterone propionate, testosterone Sustanon 250, testosterone phenylpropionate, testosterone decanoate, testosterone isocaproate, iyo testosterone undecanoate.
Sababta ka dambeysa isticmaalka ballaaran ee esters testosterone sida steroid anabolic waa sababtoo ah habka esterification wuxuu ka dhigayaa steroid anabolic wax badan oo bioavailable ah iyada oo la samaynayo hormoonka dhabta ah ama hormoonka synthetic hormoonka dheef-shiid kiimikaadka. Si fudud loo dhigo, kuwan esters-ka anabolic-ka ah ayaa noqda nooca prohormone ama pro-steroid, kuwaas oo u baahan in lagu hawlgeliyo jirka.
Maaddaama esters-ka anabolic steroid la siiyo iyada oo loo marayo cirbadaha muruqyada, waxaa muhiim ah in la ogaado faa'iidooyinka ka dhalanaya qaabkan bixinta steroids. Ciribtirka Testosterone esters waa la dhimay sida nuugista esters-yada sidoo kale waa mid gaabis ah. Tani waxay gacan ka geysaneysaa la dagaallanka arrinta nolosha nuska gaaban ee esters testosterone. Esters-yadan waxaa loo isticmaalaa daaweynta beddelka hoormoonka iyo heerarka testosterone hooseeya, sidaas darteed waxaa muhiim ah in la haysto nolol badhkeed oo dheer.
Sida hal da ', heerka testosterone bilaabay inuu hoos u dhaco. Tani waa qayb caadi ah oo ka mid ah da'da sii kordheysa ee ragga, iyada oo ay jirto hoos u dhac boqolkiiba 1 ah heerarka testosterone sannadkii ka dib da'da 30 sano. Qof kasta oo da'dan ka weyn ayaa suurtogal ah inuu ka faa'iidaysto daaweynta testosterone kuwa isticmaalaya irbado esters testosterone sheeganaya inay arkaan horumar weyn oo ku saabsan tirada muruqa, koritaanka murqaha, libido, iyo guud ahaan caafimaadka maskaxda iyo jidhka.
Cirbadaha testosterone waxay leeyihiin faa'iidooyin dhowr ah laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in marka laga hadlayo mawduucan, cirbadaha testosterone ay tixraacaan cirbadaha testosterone esters. Cirbadahaas oo kaliya waxay u baahan yihiin in la qaato hal mar labadii ilaa afartii toddobaadba mar, taas oo u sahlaysa jidh-dhisayaasha iyo ciyaartoyda si ay ugu hoggaansamaan daaweynta testosterone. Nasashadan dheer ee u dhexeeya irbado ayaa suurtogal ah sababtoo ah xaqiiqda ah in cirbadaha muruqyada dhexdooda ay hoos u dhigaan nuugista testosterone ester ee dhiigga. Waxaa intaa dheer, habka esterification ka dhigaysa dheef-shiid kiimikaad testosterone synthetic adkaysi, taasoo la micno ah in si tartiib ah loo sii dayn doonaa oo loo isticmaalo ilaa by jidhka. Dhammaan tani waxay keenaysaa nolol dheer oo nus-nolosha testosterone synthetic iyo ciribtirka tartiib tartiib ah.
Guud ahaan, bodybuilders iyo ciyaartoyda door bidaan irbado testosterone sababtoo ah dhowr faa'iidooyin ee hoormoonka in hoos lagu faahfaahiyey:
(1) Koritaanka Murqaha
Testosterone waxay u shaqeysaa sida steroid anabolic, taas oo lafteeda macnaheedu yahay dhismaha murqaha. Sidaa darteed, irbado testosterone waxaa si ballaaran loo isticmaalaa by ciyaartoyda iyo bodybuilders awooddooda si kor loogu qaado oo loo hagaajiyo koritaanka murqaha. Testosterone caadi ahaan waxay qabataa hawlaheeda kala duwan iyagoo u beddelaya estrogen ama dihydrotestosterone, taas oo ah qaabka ugu awoodda badan hormoonka. Si kastaba ha ahaatee, faa'iidooyinka ay bodybuilders raadiyaan waa natiijada ficilka tooska ah ee testosterone ee muruqyada iyo baruurta.
Testosterone waxay kicisaa unugyada horudhaca muruqa ee loo yaqaanno unugyada satalaytka, si ay u firfircoonaadaan ka dibna ama la dhexgeliyo fiilooyinka muruqa si ay u keenaan korodhka xajmiga muruqa ama in la isku daro oo ay sameeyaan fiilooyinka muruqa cusub. Iyadoo aan loo eegin habka la raaco, natiijada ugu dambeysa ee kicinta testosterone waa korodhka murqaha. Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee ciyaartoyda iyo bodybuilders door bidaan in ay isticmaalaan irbado testosterone.
Testosterone waxay sidoo kale kordhisaa tirada dadka qaata androgen-ka ee fiber muruqa iyadoo kordhinaysa tirada nuklei ee fiilooyinka muruqa. Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay marka jidh-dhisayaashu ay tababaraan, maadaama tababarku u janjeero inuu hagaajiyo dareenka dadka qaata androgen-ka. Iyada oo tirada sii kordheysa ee receptors in ay xasaasi u yihiin esters testosterone, way u fududahay testosterone in ay ku xidho fiilooyinka muruqa oo ay qabtaan shaqada muruq-kordhinta.
Testosterone waxaa si weyn loogu yaqaannaa steroid anabolic laakiin sidoo kale waa steroid-ka-catabolic taas oo asal ahaan ka dhigan tahay in aan kaliya kicin dhismaha murqaha, laakiin sidoo kale waxay ka hortagtaa burburka muruqa iyada oo la xakameynayo dhaqdhaqaaqa hormoonnada catabolic ee jirka. Tani waxay sii kor u qaadaysaa koritaanka murqaha ee jidh-dhisayaasha.
(2) Adkeysiga Hagaajiyay
Testosterone waxay awood u leedahay inay hagaajiso socodka dhiigga iyada oo kicinaysa dhaqdhaqaaqa erythropoietin ee jirka. Hormoonkan waxa uu sameeyaa waa in uu kor u qaado samaynta unugyada dhiigga, gaar ahaan, unugyada dhiigga cas. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay ciyaartoyda iyo kuwa jir dhisayaasha ah maadaama ay u baahan yihiin ogsijiin kordhaysa si ay ugu dhigmaan baahida oksijiinta muruqa inta lagu jiro jimicsiga. Sida unugyada dhiigga cas cas waxay qaadaan ogsijiinta dhiigga oo ay geeyaan murqaha durugsan, kororka unugyada cas ee dhiigga sababtoo ah testosterone ayaa faa'iido badan u leh iyaga.
Kororka sahayda oksijiinta waxay u shaqeysaa sidii kor u kaca dulqaadka sababtoo ah waxay ka hortagtaa daalka hore ee murqaha waxayna u ogolaataa ciyaartoyda tababarka si ay u shaqeeyaan muddo dheer.
(3) Xoog muruqa oo kordhay
Habka ugu fudud ee loo maro testosterone oo kordhiya xoogga muruqa waa kordhinta xajmiga muruqa, kaas oo laga hadlay kor. Farsamadan waxaa la aaminsanaa in ay tahay habka kaliya ee wax loo qabto irbado testosterone taas oo keentay kor u kaca xoogga muruqa laakiin horumarkii ugu dambeeyay ee dhinaca daawada ayaa lagu ogaaday in xoogga muruqa uu sidoo kale wanaajiyo ficilka testosterone ee heerarka calcium.
Murqaha oo yaraada, sidaa awgeed, xooggu waxay ku xidhan tahay kalsiyumka lagu sii daayo unugga dhexdiisa. Testosterone waxay kordhisaa sii daynta kaalshiyamka, si loo hagaajiyo murqaha murqaha, iyo markaa, waxay kordhisaa xoogga muruqa. Tani waxay si gaar ah faa'iido u leedahay jidh-dhisayaasha leh jimicsiyo miisaan-qaadid ballaaran.
(4) Waxqabadka Ciyaaraha La Wanaajiyey
Testosterone, ee heerarka caadiga ah, dhab ahaantii saameyn toos ah kuma laha waxqabadka ciyaaraha fudud, laakiin ciyaartoyda Olombikada ayaa la ogaaday inay leeyihiin heerar sare oo testosterone ah. Labka iyo dheddiggaba waxaa la arkay in ay si aad ah uga wanaagsan yihiin heerarka testosterone ee jirka oo kordhay, in kasta oo habka aan weli si cad loo garan.
(5) Ilaali baruurta jidhka iyo isku dhafka miisaanka
Maadaama testosterone uu si toos ah ugu dhaqmo habka dhexe ee neerfayaasha si loo xakameeyo dheef-shiid kiimikaadka, maaha wax la yaab leh in la arko baruurta iyo miisaanka kordhay ragga ee leh testosterone hoose. Waxaa intaa dheer, heerarka testosterone hooseeyo ee ragga inta badan waxay keenaan hoos u dhaca kharashka kalooriyada leh heerarka dheef-shiid kiimikaad hooseeya oo gaabis ah sababtoo ah saameynta testosterone ee habka dhexe ee dareenka.
Kordhinta hoormoonka testosterone iyada oo loo marayo cirbadaha testosterone waxay ka caawisaa nidaaminta halabuurka culeyska leh hoos u dhaca dufanka jirka. Cirbadaha Testosterone waxay hubisaa in miisaanka la helay uu ugu horrayn yahay cufnaanta muruqa ee aan baruurta jidhka ahayn. Tani waxay ka caawisaa ciyaartoyda iyo bodybuilders sida ay u isticmaalaan xaddi badan oo calories ka dibna iyaga sidoo kale gubaya, laakiin ma la kulmaan murqaha lumin laakiin halkii baruurta khasaaro.
Irbada testosterone inta badan waxaa ku jira testosterone esters sababtoo ah faa'iidooyinka kala duwan ee ester-yada ee kor lagu faahfaahiyay. Tilmaamaha qaabdhismeedka ee esters-yada ugu caansan ee duritaanka testosterone, marka la barbardhigo daawada testosterone, ayaa lagu xusay hoos:
Androgen Ester Qaraabo
T ka koobanb
Booska Moiet(yada) nooca Lengtha
Baaritaan la'aanta baaritaanka C17β Undecanoic acid Aashitada dufanka leh ee silsilad toosan 11 1.58 0.63
propionate testosterone C17β Propanoic acid Aashitada dufanka leh ee silsilad toosan 3 1.19 0.84
Phenylpropionate testosterone C17β Phenylpropanoic acid Aashitada udgoonka leh - (~6) 1.46 0.69
Testosterone isocaproate C17β Isohexanoic acid Ashitada dufanka leh ee silsilad-laan ah - (~5) 1.34 0.75
Testosterone isobutyrate C17β isobutyric acid Aashitada udgoonka leh - (~3) 1.24 0.80
Imtixaanka maqaarka C17β Heptanoic acid Aashitada dufanka leh ee silsilad toosan 7 1.39 0.72
Dajinta tijaabada ah C17β Decanoic acid Aashitada dufanka leh ee silsilad toosan 10 1.53 0.65
Cootionate testosterone C17β Cyclopentylpropanoic acid Aashitada udgoonka leh - (~6) 1.43 0.70
Testosterone waxay ka kooban tahay C17β Hexanoic acid Aashitada dufanka leh ee silsilad toosan 6 1.35 0.75
Testosterone buciclated C17β Bucyclic acide Carboxylic acid caraf udgoon - (~9) 1.58 0.63
Hormoonkaas - - - - 1.00 1.00
Hoos waxaa ku xusan sifooyin toos ah oo ka mid ah testosterone ester kasta iyo sida ay u qabtaan ee jirka.
Waxaa loo yaqaan 'Testosterone Enanthate'
Imtixaanka maqaarka waxaa lagu iibiyaa magaca summada, delatesteryl iyo xyosted, waxaana la siiyaa irbad muruqa-muruqa ah ama cirbad-hoosaad afartii toddobaadba mar. Dalka Maraykanka, waa jadwalka III walaxda la kantaroolo waana sharci in loo isticmaalo kuwa ka cabanaya heerarka testosterone hooseeya iyo ragga transgender-ka. Kanada, isla testosterone ester waa jadwalka IV walaxda la xakameeyey.
Testosterone enanthate waa metabolized beerka waxaana laga soo saaraa kaadida, iyada oo nolosha nuska ah afar maalmood ilaa shan maalmood.
Waxaa loo yaqaan 'Testosterone Cypionate'
Cootionate testosterone waa ester-ka ugu badan ee loo isticmaalo testosterone kaas oo lagu iibiyo magaca astaanta depo testosterone. Waa wax yar dhinaca pricier marka la iibsado magaca astaanta si kastaba ha ahaatee, foomamka guud ee testosterone ester waa ku dhawaad ​​kala bar qiimaha testosterone depo. Testosterone cypionate waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ragga leh heerarka testosterone hooseeya iyo ciyaartoyda Maraykanka iyo Kanada, waa jadwalka II walaxda la xakameeyey iyo jadwalka IV ee la xakameeyey.
Marka loo eego cirbadeynta muruqa oo kaliya, Testosterone cypionate waa metabolized beerka waxayna ka soo baxdaa labadaba, kaadida iyo saxarada, in kasta oo qiyaasta kaadida ee dheef-shiid kiimikaadka aan firfircooneyn ee ester-ka uu aad u sarreeyo. Waxay haysataa nolol badhkeed oo ah 8 maalmood.
Waxaa loo yaqaan 'Testosterone Propionate'
Waxaa lagu iibiyaa magaca astaanta, testoviron, propionate testosterone waa testosterone ester kaas oo lagu maamulo iyada oo loo marayo cirbadeynta murqaha ama iyada oo loo marayo dariiqa buccal ee maamulka. Si la mid ah esters-yada kor ku xusan, Testosterone propionate sidoo kale waa jadwalka III walaxda la xakameeyey iyo jadwalka IV ee walaxda la xakameeyey ee USA iyo Canada, siday u kala horreeyaan.
Nolosha nuska ah ee testoviron waa 20 saacadood, iyo marka la dheefshiido beerka, testosterone propionate ayaa ugu horreyn iyo gebi ahaanba ka soo baxa kaadida.
Sustanon 250 ama Sustanon 100 waa cirbad muruqa ah oo la diyaariyey iyadoo la isku daray afar ester testosterone oo kala duwan, kuwaas oo ah, testosterone phenylpropionate, testosterone decanoate, testosterone isocaproate, iyo testosterone propionate. Waa diyaarinta saliidda 1 ml oo ka kooban 250 mg ee esters testosterone oo halkan lagu sheegay.
Sustanon waxaa si weyn loogu isticmaalaa Great Britain sida beddelka testosterone iyo sidoo kale waa mid ka mid ah in inta badan ay door bidaan bodybuilders iyo ciyaartoyda.
Waxaa lagu iibiyaa magaca calaamadda tijaabada, testosterone phenylpropionate waa testosterone ester oo sidoo kale loo yaqaan Testosterone phenpropionate iyo Testosterone hydrocinnamate. Waxay ahaan jirtay qayb ka mid ah Sustanon 250 ee kor ku xusan oo hadda kaliya ku jira testosterone isocaproate. Waxaa loo isticmaalaa in si ballaaran loo qaybiyey Great Britain iyo Romania, sida qayb firfircoon ee dhowr badeecooyinka kuwaas oo sidoo kale ku jira esters kale oo testosterone. Si kastaba ha ahaatee, looma suuq geeyo ama looma qaybiyo inta hadda la joogo waxaana inta badan loo isticmaalaa ujeedooyin cilmi baaris ah.
Testosterone decanoate looma iibin hal diyaarinta ester testosterone laakiin waa qayb ka mid ah diyaarinta Sustanon oo ay weheliso testosterone isocaproate iyo testosterone phenylpropionate. Ester-kan ayaa hadda la daraaseeyaa sababtoo ah muddada dheer ee ficilku si kastaba ha ahaatee, la'aanta awood u leh inuu u dhaqmo sida diyaarinta hal-daroogadu waxay caqabad ku tahay saameynteeda.
Testosterone isocaproate waxaa lagu iibiyaa magaca sustanon 250 ama Sustanon 100. Waxa loo heli karaa cirbad muruqa ah oo la dheefshiido oo laga soo saaro kaadida.
Waxaa lagu iibiyaa magaca astaanta Andriol iyo Aveed, testosterone undecanoate, ama undecylate testosterone ayaa si weyn loo isticmaalaa muddada dheer ee ficilka. Ester-ka testosterone wuxuu leeyahay nolol nus ah oo ah 21 maalmood marka la diyaariyo saliid abuur shaaha ah iyo qiyaastii 33 maalmood marka la diyaariyo saliidda castor. Testosterone undecanoate waa midka ugu dheer nolosha nuska ah, ee dhammaan esters testosterone oo leh testosterone decanoate oo soo galaya meel labaad.
Testosterone undecanoate waa jadwalka III walaxda la kantaroolo iyo jadwalka IV walaxda la xakameeyey ee Maraykanka iyo Kanada, siday u kala horreeyaan. Waxa loo maamulaa sidii muruqa-muruqa, alaabta waxa metabolized by beerka oo soo saaray ugu horrayn gudaha kaadida. Sababtoo ah nolosha nuska dheer iyo qiyaasta maamulka ee 1000 mg, testosterone undecanoate kaliya ayaa la maamulaa toddobaad kasta 12.
Ka hor inta aan la go'aansan on the best testosterone ester for bodybuilding, waxaa muhiim ah in la fahmo waxa esters sameeyo iyo sida ay u shaqeeyaan. Waxaa intaa dheer, waxaa muhiim ah in la go'aamiyo baahida shakhsi ahaaneed iyo inta testosterone loo baahan yahay, oo ay la socdaan inta jeer ee bodybuilders iyo ciyaartoyda diyaar u ah inay maraan irbado testosterone. Marka waxaas oo dhan la go'aamiyo, raadinta ester testosterone ugu fiican ayaa bilaabi kara.
Testosterone propionate waa midka ugu kharashka badan uguna waxtarka badan testosterone ester oo ay weheliso sustanon. Bodybuilders ayaa inta badan laga helaa inay aaminaan oo ku dhaartaan labadan ester testosterone. Dhab ahaantii, labadan waxaa loo arkaa inay yihiin testosterone ugu fiican ee bodybuilding si kastaba ha ahaatee, tani waxay ku xiran tahay isbedel ku salaysan baahida iyo rabitaanka bodybuilder.
Wixii macluumaad dheeraad ah, cayriin ah alaab-qeybiye steroid waxaa lala xiriiri karaa si loo fahmo midka kugu habboon iyo kuwa ugu caansan, iyo sababta. Haddii cirbadaha testosterone aysan ahayn wax aad diyaar u tahay inaad marto, noocyada kale ee testosterone sida kiniiniyada testosterone oo leh budada testosterone cayriin iyaga ayaa sidoo kale la cuni karaa.
1.Waa maxay sababta aad u tixgeliso budada xoojinta testosterone?
Sida kor ku xusan, heerarka hoormoonka ayaa hoos u dhacaya marka ay da'doodu korto. Inta u dhaxaysa da'da 20 iyo 25 waa marka heerarku ay yihiin kuwa ugu sarreeya. Markaad gasho bartamaha soddonaadyada, heerka hoormoonkaagu wuxuu si tartiib tartiib ah u bilaabaa inuu hoos u dhaco. Hoos u dhigista heerarka testosterone ee da'da waa hab caadi ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa dhacaya ayaa ah in hawlaha kala duwan ee jidhka ee uu taageero hormoonku ay saameyn ku yeeshaan.
Waxaad ogaan doontaa in dhimista miisaanka ay noqoto mid adag in kasta oo aad ka shaqeyso; waxqabadka galmadu uma fiicna sidii hore, korriinka murqahana waa la saameeyaa. Sidoo kale, korriinka muruqa ayaa si weyn hoos ugu dhacaya. Laakiin weli uma baahnid inaad ka walwasho. Waxaa jira xalal dabiici ah, oo ah qaab kaabis cunto, kuwaas oo laga heli karo suuqa. Budada xoojisa Testosterone ee laga sameeyay walxaha dabiiciga ah waa in la siiyaa fursad maadaama dad badan ay ka faa'iideysteen kaabayaashan iyada oo aan wax saameyn ah oo xun.
Maskaxda ku hay in kaabayaashan aan loogu talagalin in lagu wanaajiyo heerarka qof 60-jirka ah si uu ula mid noqdo iyaga ka yar ee 20-ka jira. Waxaa loo abuuray si kor loogu qaado heerarka, sidaas darteed jidhku wuxuu qabtaa dhammaan hawlaha loo baahan yahay ee ku xiran heerka hoormoonka oo leh natiijooyin wanaagsan.
Kobciyeyaasha testosterone guud ahaan waa kaabyaal dabiici ah oo kordhiya testosterone iyo hormoonnada la xiriira testosterone ee jirkaaga. Qaar ka mid ah xoojiyayaasha testosterone waxay sidoo kale ka shaqeeyaan xannibaadda estrogen, hormoonka jinsiga ee dumarka.
♦ Bukaannada qaba hypogonadism (marka qanjidhada galmadu soo saaraan wax yar ama aan lahayn hormoono galmo), xoojiyayaasha testosterone waxay si xoog leh u rogi karaan adduunkooda iyagoo ka dhigaya inay dareemaan tamar iyo garaacid.
♦ Ragga qaarkood ee qaadanaya xoojiyeyaasha tijaabada waxa laga yaabaa inay arkaan isbeddel wanaagsan oo niyadooda ah, korodhka cufnaanta murqaha, cufnaanta lafaha, iyo dareenka galmada.
♦ Intaa waxaa dheer, xoojiyayaasha testosterone waxay kaa caawin karaan dhibaatooyinka la xiriira cillad la'aanta kacsiga waxayna ka dhigi karaan inay ku sii dheeraadaan sariirta.
♦ Kaabista testosterone waxaa la rumeysan yahay inay hoos u dhigto halista cudurrada wadnaha iyo cudurrada la xiriira waallida. Si kastaba ha noqotee, kuwa u nugul cudurrada wadnaha iyo istaroogga waa inay taxaddaraan ka hor inta aan la bilaabin xoojinta testosterone nooc kasta. Haddii aad qabto dhibaatooyin wadnaha ah laakiin aad dareento xoojiye testosterone waa lagama maarmaan, la xiriir dhakhtarkaaga ka hor inta aanad bilaabin wax daaweyn ah.
3. Why do many bodybuilders door bidaan in ay iibsadaan steroid testosterone enanthate budada?
Anabolic steroids testosterone enanthate budada waxaa ugu horreyn loo isticmaalaa jir-dhisayaasha, ciyaartoyda, iyo jirdhiska "buffs" kuwaas oo sheeganaya steroids iyaga siinaya faa'iido tartan iyo / ama hagaajinta waxqabadkooda jireed. Steroids waxaa lagu sheegaa inay kordhiso cufnaanta jirka ee caatada ah, xoogga iyo gardarrada. Testosterone enanthate budada ayaa sidoo kale la aaminsan yahay in ay yarayso wakhtiga soo kabashada ee u dhexeeya jimicsiga, taas oo suurtogal ka dhigaysa in si adag loo tababaro oo si dheeraad ah u wanaajiso xoogga iyo dulqaadka. Qaar ka mid ah dadka aan ciyaartoyda ahayn ayaa sidoo kale ku duraa saliidaha testosterone enanthate si ay u kordhiyaan dulqaadkooda, xajmiga murqaha iyo xoogga, iyo yareeyaan dufanka jidhka oo ay aaminsan yihiin inay hagaajiyaan muuqaalka shakhsi ahaaneed. Sidaa daraadeed, testosterone enanthate budada iibka ah waa waxyaabo aad caadi u ah suuqa, Halka ay jiraan iibsadayaal, waxaa jira iibiyeyaasha. AASraw had iyo jeer waxay bixisaa imtixaan dhab ah e budada iyo budada kale ee testosterone ee Shiinaha.
4.Ma budada testosterone sharci-darro ah?
Xaaladda sharciga ah ee budada testosterone waxay ku xirnaan doontaa sharciyada waddanka iyo haddii ay tahay daawo dhakhtar qoray iyo in kale. Dalka Mareykanka, budada Testosterone waa walaxda Jadwalka III ee la xakameeyey, taas oo macnaheedu yahay inaadan heli karin steroidkan anabolic iyada oo aan la helin warqad dhakhtar oo sax ah.
Waxaa laga yaabaa inaad awood u yeelato inaad iibsato budada testosterone miiska miiska laakiin tani waxay ku xirnaan doontaa sharciyada dalkaaga. Tusaale ahaan, waxaad ka iibsan kartaa budada Testosterone miiska miiska ee Mexico iyada oo aan la qorin laakiin si adag ayay uga soo horjeedaa sharciga in la keeno testosterone propionate gudaha Maraykanka.
5.How to homebrew saliidaha testosterone tallaabo tallaabo? (Tusaale ahaan, saliidaha enanthate Testosterone)
Dadka intooda badan, waxay door bidaan in ay sameeyaan saliidaha testosterone naftooda, waa hab aad u fudud oo lagu dhammeyn karo annaga, ilaa intaad diyaar u tahay dhammaan qalabka iyo cuntooyinka, sababtoo ah cayriin badan oo steroid ah ayaa leh nidaam la mid ah si ay u sameeyaan saliidaha la dhammeeyey ee duritaanka. Aan samayno hadda. Tusaalahan waxaan si fudud u isticmaali doonaa enanthate testosterone.
Waxaan doonayaa in aan sameeyo 10 dhalo of testosterone enanthate at 10ml dhalo kasta. Taasi waa wadarta 100ml walax waxaanan ka dhigi doonaa 250mg/ml
Tan waxaan u isticmaali doonaa saamiga BA/BB ee 2/18, taasoo la micno ah 2% ba iyo 18% bb, run ahaantii ma aha inaad "qasab" ku leedahay tan laakiin waxay kaa caawineysaa inaad khafiifiso isku dhafka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho wax yar ba, taasoo ka dhigaysa tallaalka mid aan xanuun lahayn oo waxaad si fudud ugu kici kartaa ilaa 400mg/ml haddii aad rabto
1) Ku xidh dhammaan doorsoomayaasha roid calculator,
Halkan waxa aad ku shubi doontaa saliid ml's=100ml
Qiyaasta waxay noqon doontaa 250 mg / ml
Ka tag miisaanka budada .75, tani waxay si fiican u shaqeysaa inta badan wax kasta
Ba, geli .02(2%)
BB, geli .18(18%)
Tani waxay ku siin doontaa waxyaabaha soo socda marka loo eego xisaabiyaha
-61.25ml oo saliid nadiif ah (waxaan door bidayaa canabka)
-25.00 garaam oo budada enanthate ah
-2 ml oo ah BA
- 18 ml oo ah BB
2) Isticmaal basbaaska 500ml oo ka nadiifi sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, ma aha heshiis weyn sababtoo ah waxaan sifeyn doonaa waxa aan ka soo saarno. Qaado 25.00 garaam oo budada enanthate ah oo ku rid digsiga.
3) dhig 2ml ee BA iyo 18ml ee BB meeshaas, tan si fudud ayaa loogu cabbiraa silingaha 10 ama 20cc. Waxay u muuqan doontaa sidii haddii tani aysan ku filneyn inay milaan dhammaan budada, laakiin way dhici doontaa.
4) dhig digsi shiilan oo dulsaar shooladda sare ee kulaylka 3 ama wax ka badan, waxaan jeclahay in aan biyo ku shubo digsiga sidoo kale. Marka xigta ku dheji digsiga digsiga oo leh ba/bb/budada digsiga oo u ogolow biyaha/ digsiga kuleylka kuleylka. Waxaad arki doontaa budada oo bilaabaysa inay "dhalanto" ama milmaan waxayna samayn doontaa xal inta badan. Waxaad isticmaali kartaa ul dhalo ah si aad u kiciso oo aad u dedejiso habkan
5) Ka dib markii ba / bb ay kala diraan budada, Hadda ku shub 61.25ml ee saliid nadiif ah oo ka tag kulaylka oo ku walaaq usha dhalada dhowr daqiiqo, waxaad yeelan doontaa isku dar ah oo nadiif ah.
6) marka xigta waxaan jeclahay in aan hoos u dhigo kulaylka ilaa 1 ama wax ka badan si isku darku u diirimaad……siinta isku dhafka iyadoo diiran aad ayey uga sahlan tahay marka heerkulku qolka.
Ku rid cirbaddaada cusub ee 18g ah dhexda caagga ah oo geli dhalo 100ml ah oo aan nadiif ahayn dabcan. Ku rid .45 shaandhada whatman dusheeda cirbadaha si la mid ah beddelka finanka.
7) Isticmaal sirinji 10ml ah si aad u soo saarto saliidda diirran, ku riix saliidda shaandhada Whatman oo aad geliso dhalo dhalo nadiif ah. Inta badan saliingaha aad isticmaashid way adkaanaysaa in aad saliidda ku riixdo halkaas. Caadi ahaan waxaan isticmaalaa saliingaha 30ml si aan saliidda uga soo saaro biraha ka dibna dib u buuxi 10ml saliingaha oo aan ku riixo 10ml saliingaha maadaama ay nabarkeeda u dhowdahay in aan macquul ahayn in lagu dhex riixo 30ml.
8) Ka dib marka dhammaan la riixo waxaad haysataa 100ml oo ah 250mg/ml oo ah isteerooydh la isku duro oo nadiif ah oo badbaado leh. Qaarkood waxay jecel yihiin inay dubtaan si ay u nadiifiyaan xitaa heerkan laakiin anigu mid uma arko inay muhiim tahay haddii aad leedahay maaddooyin nadiif ah. Waxaan si dhab ah u qaatay boqollaal cc oo aan waligey la kulmin arrin dhalmo la'aan ah, ba waxay qabataa shaqadeeda ah inay ka dhigto madhalaysnimo!
9) Hadda waxaad soo saari kartaa 10ccs markiiba waxaadna buuxin kartaa 10ml si gaar ah si aad u sameyso 10 dhalo
Tani waa habka buuxa ee lagu sameeyo saliidaha la dhammeeyey, waxaan aaminsanahay in su'aalo badan laga jawaabay ka dib akhrinta tallaabadan. sida loo sameeyo propionate testosterone ka budada?sida loo rogo budada testosterone galay beddelka saliidda? Tijaabi saliidaha prop iyo tijaabi saliida cyp, xitaa sus 250 saliid, habka saliida homebrew waa la mid, kaliya cunto ka duwan. Cunto karinta, waxaad u baahan tahay inaad kala hadasho iibkayaga markaad dalbato, waxay isku dayi doonaan inay bixiyaan macluumaadka aad rabto inaad ogaato.
6.Waa maxay sustanon 250 budo ka samaysan?
Sustanon 250 waa isku-dhafka testosterone ee caanka ah (isku-dhafka) waana su'aal la'aan isku dhafka ugu caansan uguna caansan ee abid la sameeyo. Waxaa soo saaray Organon, fikradda ka dambeysa Sustanon 250 waxay ahayd inay bixiso ugu wanaagsan ee testosterones yaryar (gaaban) iyo waaweyn (dheer) ester ee hal xarun. Tani waxay u oggolaanaysaa qofka in uu ilaaliyo heerarka dhiigga xasilloon ee hoormoonka testosterone oo leh jadwal aan caadi ahayn oo duritaan ah iyadoo isla mar ahaantaana la helayo faa'iidooyin firfircooni degdeg ah.There are four esters that make up the sustanon 250 mix:
Hormoonkaas p30 mgs: Marka laga reebo 250 mgs ee ka kooban xaruntan, kaliya 30mg (12%) waa ester-ka propionate-ka oo aad u gaaban; Sidaa darteed, Sustanon 250 waa inaan marnaba loola dhaqmin sidii propionate. Caadi ahaan, propionate ester waxaa isticmaala kuwa raadinaya ester gaaban oo wareeg ah oo kaliya 8 toddobaad ama ka yar, kaas oo u baahan in la isku duro maalin kasta ama maalin kasta. Nolosha nuska ahi waa 3.5 maalmood oo keliya, sidaa awgeed waxay ku jirtaa oo ka baxsan tahay nidaamka si ka dhakhso badan esters kale. Dhab ahaantii, bodybuilders badan ayaa sidoo kale sheegaya in ay la kulmaan aromatization ka yar propionate ah, taas oo laga yaabaa in wax la sameeyo xaqiiqda ah in aanay ku sii nagaadaan nidaamka aad u dheer.
Hormoonkaas phenylpropionate 60 mgs: Ester-kani waa kan labaad ee ugu gaaban isku-dhafka, waxaana inta badan laga helaa Nandrolone Phenylpropionate (NPP). Waxay leedahay nolol nus ah oo ah 4.5 maalmood oo keliya, marka sida propionate-ku si tartiib tartiib ah u dhaco, waxaad filan kartaa in phenylpropionate uu halkaas joogo oo uu bixiyo kor u kac ka hor intaanay esters-ka dheer bilaabin inuu soo galo.
Hormoonkaas isocaproate 60 mgs: Tani waa ester saddexaad ee ugu gaaban oo leh liiska nuska nolosha ee 9 maalmood, taas oo u dhow ester enanthate, maadaama ay leedahay 10.5 maalmood nolol badhkeed.
Hormoonkaas decanoate 100 mgs: Ester-kan aadka u dheer wuxuu hayaa saamiga ugu weyn ee walaxda firfircoon ee sustanon, taasoo ka dhigaysa 100 mgs wadarta 250 mgs. Nolosha kala bar ee esterkan waa 15 maalmood oo aad u culus.
Cuntada budada ah ee testosterone sustanon tusaale ahaan:
Testosterone Sustanon 250mg/ml @ 100ml cunto karinta:
Testosterone Blend budada 25g (18.75ml)
Saliid 59.25ml Saliid
7.Waa maxay testosterone ka fiican yahay Testosterone Sustanon 250 budada ama budada enanthate?
Marka ay timaado isbarbardhigga budada Sustanon 250 iyo Testosterone Enanthate budada, farqiga aasaasiga ah wuxuu ku jiraa dhererka esterka.
Sustanon 250 budada ah, oo ah isku-darka muddada-dheer ee Testosterone, waxay qaadataa waxoogaa dheer si loo "laado" laakiin faa'iidooyinka ka soo baxa xaruntan anabolic ayaa lagu gaari karaa iyada oo la yareynayo irbado soo noqnoqda. Testosterone Enanthate, dhanka kale, waxaa looga baahan yahay in la maamulo usbuuc kasta sababtoo ah esters gaaban inkastoo saameynteedu ay ka dhaqso badan tahay Sustanon.
Testosterone enanthate budada, marka loo isticmaalo wareegyada 10-12 toddobaadyo, waa steroid ku habboon maadaama ay u fududahay ciyaartoyda si ay u go'aamiyaan oo ay u maareeyaan heerarka testosterone. Si kastaba ha ahaatee, faa'iidadan ayaa laga yaabaa inay xoogaa lumiso marka muddada wareegga uu yahay 4-6 toddobaad maadaama saameynta steroid ay bilaabi doonto inay soo baxdo 2-4 toddobaad ka dib. Sababtoo ah esters-ka isku dhafan, Sustanon waa steroid adag oo wax looga qabanayo marka ay timaado maaraynta hufan ee heerarka dhiigga.
Si kastaba ha ahaatee, Testosterone enanthate budada ayaa la rumeysan yahay inay ka dulqaad badan tahay Sustanon marka ay timaado maareynta saameynta estrogenic. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in heerarka dhiigga ee testosterone ay u muuqdaan inay ku dhismaan xawaare gaabis ah isticmaalka Testosterone enanthate iyo tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in waxyeellooyinku aysan soo bixin goor hore. Doorashada u dhaxaysa budada Sustanon 250 iyo Testosterone Enanthate budada waxay ku xiran tahay rajada laga filayo wareegga steroid iyo waayo-aragnimadii hore (haddii ay jirto).
8. Tijaabi E budada Vs. Tijaabi budada C
▪ Tijaabi budada E iyo Baadhitaanka C budada waa laba nooc oo kala duwanaanshiyaha testosterone esterified.
Ujeedada ugu weyn ee esterification testosterone waa in la kordhiyo isticmaalka daawada iyo kuwa aan caafimaadka ahayn.
Sidaa darteed, labada noocba waa kuwo la taaban karo oo la isticmaali karo.
Waxay kordhiyeen nolosha nuska ah.
Waxay yihiin androgens oo leh saameyn la mid ah kuwa xoojiya testosterone.
Labaduba waxay muhiim u yihiin daawada iyo dhisidda jirka si loo kordhiyo heerarka testosterone hooseeya.
Waxaa lagu duri karaa irbado.
Labaduba waa caan sababtoo ah korodhka nolosha nuska ah iyo daaqada sii daynta oo sii dheeraatay taas oo suurtagelinaysa in la sameeyo nidaamyo maamul oo ku habboon duritaan iyo maamul.
Imtixaanka E budada ama Testosterone Budada Enanthate waxaa loola jeedaa crystalline crystalline C26H40O3 oo loo isticmaalo gaar ahaan daaweynta eunuchism, eunuchoidism, iyo yaraanta androgen ka dib markii la tuuray, calaamadaha andropause, iyo oligospermia halka Testosterone Cypionate budada ay tilmaamayso. ilaa 17 (beta) -cyclopentylpropionate ester of the androgenic hormone testosterone inta badan loo isticmaalo daaweynta heerarka testosterone hoose ee ragga. Sidaa darteed, tani waxay sharraxaysaa farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Imtixaanka E budada iyo Imtixaanka budada C. Sidoo kale, farqi kale oo u dhexeeya Imtixaanka E budada iyo Imtixaanka C budada ee tijaabinta budada E waxay leedahay asal caalami ah halka Imtixaanka C uu yahay badeecad Maraykan ah.
Nolosha nuska ah waa farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Imtixaanka E budada iyo Imtixaanka budada C. The nolosha nuska ah ee Imtixaanka E waa 10.5 maalmood halka nuska nolosha ee Imtixaanka C uu yahay 12 maalmood. Qiyaasta caadiga ah ee Imtixaanka E waa 100 ilaa 600 mg asbuucii 10 ilaa 12 toddobaad halka qiyaasta caadiga ah ee tijaabada C ay tahay 400 ilaa 500 mg toddobaadkii 12 toddobaad. Waxaa intaa dheer, Imtixaanka E waa in la isku duraa si ka badan Tijaabada C. Caannimada sidoo kale waa farqi u dhexeeya Imtixaanka E iyo Imtixaanka C. Tijaabada E ayaa aad caan u ah halka Imtixaanka C marka la barbardhigo caan yar yahay.
Tijaabi budada E ama Testosterone Enanthate waa nooc ka mid ah noocyada testosterone esterified oo leh nolol nus ah oo ah 10.5 maalmood. Waa 7-kaarboon ester oo leh asal caalami ah. Dhanka kale, Imtixaanka C waa nooc ka mid ah kala duwanaanshaha testosterone esterified oo leh nus-nolosha 12 maalmood. Sidoo kale, waa 8-kaarboon ester oo asalkiisu yahay Ameerika. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ay ugu wacan tahay nolosha nuska dheer ee yar, Imtixaanka E waa in la isku duraa si ka badan tan budada C. Sidaa darteed, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Imtixaanka E iyo Imtixaanka C waa inta isticmaaluhu u baahan yahay inuu ku shaqeeyo xarun kasta si loo gaaro saameynta ugu badan, iyo sidoo kale inta jeer ee duritaanka ee ku salaysan ester-ka.
9.Sidee loo bilaabo wareegga testosterone propionate?
Qaar badan ayaa weydiiya su'aasha ah in wareegyada gaaban ay faa'iido badan yihiin iyo in kale. Jawaabtu waa in ay yihiin, sida wareegyada steroids anabolic ee dheeraadka ah waxay soo bandhigaan arrinta HPTA aad u daran (Hypothalamic Pituitary Testicular Axis) xakamaynta oo la xiro, taasoo keentay wakhti aad u adag oo soo kabasho ah inta lagu jiro usbuucyada wareegga dambe. Inta badan oo leh wareegyo gaagaaban, HPTA ma aha, ereyada caadiga ah, "ku qabsan" si dhakhso ah hormoonnada dibadda ah. Tani waa sababta qaar badani ay ugu raaxaysan doonaan wareegyada gaaban sida wareegyada 8 toddobaad - qofku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu si degdeg ah wareegga u galo, si degdeg ah u sameeyo faa'iidooyinkiisa, oo uu ka baxo wareegga oo uu galo PCT (Daaweynta Cycle Post) ka hor inta uusan jidhku bilaabin inuu si daran u maro. xakamaynta HPTA ama la xidho. Dabcan, qof kastaa wuxuu leeyahay dareenkiisa gaarka ah ee xidhitaanka HPTA (qaar way ka gaabiyaan kuwa kale, qaarna ka dhaqso badan kuwa kale, qaarna gabi ahaanba ma xidhaan). Laakiin sida fikrad guud oo ay wadaagaan qaar badan oo ku raaxaysanaya Testosterone Propionate wareegyada gaar ahaan waa in wareegyada gaaban ay ka fiican yihiin sababahan.
❶ Bilowga Testosterone Propionate Cycle
Bilawga Testosterone Propionate Cycle Tusaalaha (10 usbuuc wadarta wakhtiga wareegga)
Testosterone Propionate at 75-125mg maalin kasta oo kale (300-500mg / todobaad)
Tani waa wareegga aasaasiga ah ee bilawga ah ee ugu muhiimsan, waana kan ugu fudud ee dhammaan wareegyada Testosterone Propionate ee bilowga ah. Waa hordhaca ugu fiican ee steroids anabolic guud ahaan qof kasta oo ku cusub adduunka isticmaalka steroids anabolic.
❷ Dhexdhexaadiyaha Testosterone Propionate Cycle
Dhexdhexaadiyaha Testosterone Propionate Cycle Tusaalaha (10 usbuuc wadarta wakhtiga wareegga)
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) at 400mg / todobaad
Todobaadyada 1-4: Dianabol at 25mg/maalintii
Tusaalaha ugu fiican ee wareegga kaas oo shakhsi ahaan uu isticmaali doono falanqeyn gaaban oo anabolic steroid ah, sida Testosterone Propionate, oo leh mudo dheer oo ah steroid anabolic oo firfircoon sida Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin). Faahfaahin gaar ah, shakhsi ahaan wuxuu caadi ahaan aamini doonaa Testosterone Propionate maalin kasta oo kale, halka Deca Durabolin la maamuli doono laba jeer toddobaadkii si siman (Isniinta iyo Khamiista, tusaale ahaan). Shakhsiga ku hawlan noocaan ah wareegga Testosterone Propionate wuxuu jadwal u samayn lahaa oo waqti ku siin lahaa Nandrolone Decanoate cirbadaha si ay ula jaanqaadaan cirbadaha kala duwan ee Testosterone Propionate. Tani waa in la yiraahdo, tusaale ahaan, haddii jadwalka cirbadaha Testosterone Propionate uu soo dego maalmaha soo socda Talaadada, Khamiista, Sabtida, Isniinta, Arbacada markaas Nandrolone Decanoate waxaa la maamuli doonaa Talaadada iyo Isniinta ee jadwalka maamulkaas.
❸ Horukaca Testosterone Propionate Cycle
Tusaalaha Wareegga Hormarsan ee Testosterone Propionate (8 toddobaad wadarta wakhtiga wareegga)
Testosterone Propionate at 25mg maalin kasta oo kale (100mg / todobaad)
Tren Acetate at 100mg maalin kasta oo kale (400mg / todobaad)
Tusaalaha caadiga ah ee caadiga ah iyo kuwa ugu muhiimsan ee wareegyada hore ee Testosterone Propionate, wareeggan gaarka ah ayaa muujinaya isticmaalka Testosterone Propionate oo ah xarun taageero ah oo loo isticmaalo qiyaasaha TRT si kali ah ujeedada ilaalinta shaqada jireed ee caadiga ah iyada oo aan la helin wax soo saarka testosterone endogenous. waxaa lagu xakameynayaa natiijada isticmaalka steroids anabolic).
10.Immisa jeer ayaan isku duro tijaabada cypionate?
Waxay kuxirantahay nolosha nuska ah ee ester of testosterone aad isku duro.
Testosterone propionoate - maalin kasta ama maalin kasta oo labaad (waxaa lagu talinayaa maalin kasta)
Testosterone enanthate / cypionate / sustanon - Hal mar todobaadkii waa qumman yahay, waxaad si muran leh u samayn kartaa taas 10 maalmood kasta. Dhakhaatiirtu mararka qaarkood waxay bixiyaan tan labadii toddobaadba mar, taas oo ah qalad.
Testosterone decanoate iyo undecanoate - Ha isticmaalin kuwan shitty esters, runtii maaha kuwo u fiican waxqabadka ciyaaraha fudud haddii aad ka shaqeyso. Caadi ahaan waxaad helaysaa hal irbad faras weyn 6 toddobaad ama wax ka badan.
Haddi aad meel fog u fogayso irbadaada waxa aad helaysaa qayb wakhtiga T hoosaysa iyo qayb wakhtiga ka mid ah oo aad u saraysa. Markaa waxa aad dareemaysaa isbeddelo niyadda ah, iyo niyad jab/qaraag maalinta u dambaysa ee tallaalka.
11.Sidee loo duraa Test e/cyp/prop/sus 250?
Waa in lagu duraa muruqa barida. Waa in aan xididka lagu durin. Raac qiyaasta saxda ah sida ku cad wareegga aad raacayso. Tijaabada e ama tijaabada cyp-ka ee la isku duro dhab ahaantii waa hawl aad u fudud marka aad dhawr jeer ku samaysay hagitaan. Testosterone prop / cyp / E kaliya ayaa lagu maamulaa cirbadeynta, taas oo shaki la'aan ah habka ugu waxtarka badan ee lagu helo testosterone jirkaaga. Iyada oo la isku duro, waxaad hubin kartaa in testosterone-kaaga ay qaadato saameyn aad u degdeg ah waxayna kuu sahlaysaa inaad ka gudubto dhibaatooyinka soo raaca ee testosterone hooseeya.
12.Intee in le'eg qiyaasta testosterone cypionate ee bulking ama jarista?
Haddii aad raadinayso in aad bulk kor iyo hesho mass muruqa caatada ah, markaas waa in aad isku durto 200-600 mg of steroid todobaad kasta ugu yaraan 2-3 irbado. Isticmaalayaasha intooda badani waxay inta badan faafiyaan irbado kuwan, tusaale ahaan 100 mg per durid maalinta koowaad iyo laba, ka dibna 200 mg maalin kasta oo kale inta lagu jiro toddobaadka soo socda.
Haddii aad isku dayayso inaad lumiso dufanka oo aad hagaajiso qeexida jidhkaaga, markaa waxaad dib u jari kartaa qiyaasta Testosterone Cypionate si aad ah. Halkii aad ku dhejin lahayd qiyaasta toddobaadlaha ah ee 200-600mg, isku day inaad isticmaasho 100-200 mg toddobaadkii. Haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaasho steroid-ka labadaba, ka dibna ku bilow 200 mg maalin kasta ilaa aad ka gaarto 6 toddobaad, ka dibna isku day inaad dib u jarto 100mg maalin kasta.
13.Can dumarka isku duro testosterone? Ka warran wareegga?
Haweenka doonaya in ay horumariyaan waxqabadkooda jireed iyo bilicda kama baqayaan suurtagalnimada in ay yeeshaan calaamado xun. Ciyaartoyda, wareegga solo ee testosterone enanthate ayaa lagula talinayaa, taas oo aan ahayn in ka badan toddobaadyada 8. Isteeroydhka anabolic waxaa lagu maamulaa qiyaasta 250mg toddobaadkii hal mar. Wareegga oo dhan, 8 ampoules ee daroogada ayaa loo baahan doonaa. Daaweynta wareegga dambe haweenku waa inay joogaan ugu yaraan 21 maalmood. Waxaad ku celin kartaa qaadashada testosterone wax aan ka horrayn ka dib bilaha 6, kaliya ka dib markaad la tashato dhakhtarka iyo samaynta imtixaanada ku habboon. Waxaa jira haween qaarkood kuwaas oo dooran doona xirmo steroid ah oo ku jira wax ka badan oo kaliya Testosterone Enanthate. Dumarku waxay caadi ahaan doortaan Anavar, Primobolan ama Masteron si ay u barbar dhigaan Imtixaanka. Dooro waxa adiga kuu shaqaynaya!
14.Intee in le'eg ayay qaadanaysaa tijaabada propionate si ay u shaqeyso?
Haddii aad la ildaran tahay testosterone hooseeya iyo dhibaatooyinka soo raaca ee la socda, waxaad u badan tahay inaad jeceshahay inaad aragto natiijooyinka daaweynta cirbadaha testosterone propionate. Taasi waa la fahmi karo, tan iyo la macaamilka testosterone hooseeyo inta badan ma aha feat fudud. Haddii aad la yaaban tahay oo ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan aad irbado propionate testosterone qaadan doonaa si ay u laad in, keligaa ma tihid. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu ogaado sida ugu dhakhsaha badan ee ay uga filan karaan natiijooyinka daawaynta duritaankooda.
Iyada oo la isku duro testosterone propionate, wakhtiga jawaabta jidhkaagu aad ayuu u kala duwanaan karaa iyadoo lagu saleynayo dhowr arrimood. Tan waxaa ku jiri kara da'daada iyo arrimo kale oo badan.
Guud ahaan, waxaad filan kartaa cirbadaha testosterone propionate si ay u bilaabaan saameyn ku saabsan 3 toddobaad gudahood. Si kastaba ha ahaatee, dulqaadku waa furaha marka la isticmaalayo irbado testosterone sida habka daaweynta ee testosterone hooseeyo. Testosterone propionate cirbadaha waxay qaadan kartaa ilaa 6 toddobaad si ay u bilaabaan qaadashada. Fadlan hubi boggayaga wakhtiga TRT si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa laga filayo cirbadaha testosterone.
Haddii aad ka walaacsan tahay xawaaraha ay cirbadaha testosterone yihiin ama aan saameyn ku yeelan xaaladdaada, markaas waa in aad la tashato xirfadlahaaga caafimaad si aad u weydiiso sida lagama maarmaanka u ah hagaajinta ee qiyaasta iyo inta jeer.
15.What waa natiijada enanthate testosterone ka hor iyo ka dib?
Laba toddobaad kadib Wax isbedel ah oo la taaban karo lama soo sheegin.
Hal bil ka dib Koritaanka murqaha iyo habka gubashada baruurta waxay bilaaban lahayd bisha ugu horreysa.
Laba bilood ka dib Kororka murqaha ayaa la ogaan karaa ka dib laba bilood iyo waxyeellooyin ayaa sidoo kale la socda isticmaalayaal badan.
Saddex bilood ka dib Laba iyo toban toddobaad gudahood waa inaad dawadan joojisaa muddo qaboojin ah. Si kastaba ha ahaatee, wakhtigan, waxaad dhisi lahayd muruqyo muhiim ah.
16.Do Waxaan u baahanahay warqad dhakhtar si aan u iibsado budada hormoonka Testosterone?
Haa, haddii aad ka soo qaadanayso budada hormoonka Testosterone sababo caafimaad, waxaad u baahan tahay warqad dhakhtar. Haddii aad u isticmaalayso sababo aan caafimaad ahayn, waxaad ka dalban kartaa suuqa madow online sharci darro ah, waxaa jira steroids badan alaab-qeybiyeyaasha budada testosterone.
17.Ma jiraan dhab ah Testosterone esters budada iibka ee Shiinaha?
Ilaa hadda sida aan wada ognahay, kuwa budada esters testosterone, imtixaan e budada, tijaabinta budada cyp, budada tijaabada ah, budada sus 250 waa kuwa aad caan u ah steroids anabolic ee suuqa, waana in si fudud looga helaa suuqa madow ee anabolic steroid iyada oo aan wax dadaal ah la helin. . sidoo kale waa wax caadi ah oo si fudud loo soo saaray oo ay tahay in lagu helo qiimo aad macquul ah. Testosterone Enanthate waxay u jirtaa sida badeecadaha darajada daawooyinka ee darajada aadanaha, iyo sidoo kale shaybaarka dhulka hoostiisa (UGL) alaabta darajada suuqa. Kala duwanaanshiyaha ayaa halkan ka muuqda, iyada oo xakamaynta tayada ay tahay arrinta ugu weyn, iyo in budada testosterone ee fasalka daawada ay badanaa aad qaali u yihiin sababo muuqda.
Markaad go'aansato inaad iibsato budada testosterone qaar ka mid ah online, waxaad u baahan tahay inaad wax badan ka barato oo aad hesho alaab-qeybiyeyaal badan, marka la barbardhigo iyaga. Waa inaan xasuusiyaa inaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato tayada cayriinka, helitaanka alaab-qeybiyaha ceeriin ee steroid dhab ah waa mid aad muhiim u ah taasna waxay noqon kartaa mid muhiim ah. kaa caawin doona inaad badbaadiso wakhtiyada qaar, waxaad heli kartaa macaamiil daacad ah iyo ganacsiyo badan mustaqbalka. AASraw waxay samaysay ganacsigan sanado badan oo waxaad kala hadli kartaa iibkooda faahfaahin dheeraad ah, ama weydii dalbashada muunada ee tijaabada markii ugu horeysay.
18. Sidee u malaynaysaa alaabta AASraw?
Tommy (Maarso 4, 2021): Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay in aan bilaabay in aan sameeyo solo Testosterone Prop cycles sababtoo ah waxa ay noqotay mid ka mid ah steroids ugu fiican ee koritaanka murqaha degdega ah iyo xoog kordhay. Waxa ugu fiican ee ku saabsan steroidkan anabolic waa in ay i siiso kor u kaca libido-kayga iyo waditaanka galmada.
Michel (Abriil 18, 2021): Waxaan iibsaday budada cayriin ee cyp ee tijaabada ah bishii hore iyo waxa ugu fiican ee ku saabsan waa inay runtii iga caawiso inaan kordhiyo kalsoonidayda. steroidkan ayaa sidoo kale iga caawisay in aan helo muruq caato ah iyo sidoo kale in aan wanaajiyo wax qabadkayga jirdhiska.
Mike (Ogosto 16, 2020): Imtixaanka budada E waa mid ka mid ah steroids ugu fiican ee miisaan lumis sababtoo ah waxay runtii iga caawisaa inaan ka takhaluso dufanka jidhka ee dheeraadka ah. Waxaan lumiyay miisaan badan anigoo sidoo kale helaya murqaha caatada ah ka dib markii aan sameeyay wareegyo badan oo solo testosterone propionate.
Jay Cooper (Maajo 12,2020): Waxaan awooday inaan yareeyo boqolkiiba dufanka jidhka, anigoo sidoo kale ku daray cufnaanta murqaha caatada ah ka dib markii aan isku duro Sus 250 saliid. steroidkan ayaa iga caawiyay inaan gaaro yoolalkayga jirdhiska jimicsiga sababtoo ah waxay dhab ahaantii kor u qaadaysaa heerarkayga xoogga iyo dulqaadka.
Austin (June 17,2021): Runtii aad ayaan uga mahadceliyey in aan doorto aasraw oo aan helay imtixaan dhab ah e budada marka ay tahay markii ugu horeysay ee aan iibsado testosterone enanthate budada Shiinaha, waa guul. Waxaan jeclahay inaan sameeyo wareegyada propionate testosterone ka dibna aan sameeyo PCT sababtoo ah waxay iga caawisaa inaan ilaaliyo xooggayga oo aan hagaajiyo murqahayga caatada ah. steroid Tani waxay ku fiican tahay helitaanka xajmiga iyo xoogga jimicsiga, iyada oo sidoo kale iga caawinaysa inaan sii wado waxqabadka jirka ee fantastik ah.
 Apicella CL, Dreber A, Campbell B, Grey PB, Hoffman M, AC yar (Noofambar 2008). "Testosterone iyo dookhyada khatarta dhaqaale". Kobcinta iyo Habdhaqanka Aadanaha. 29 (6): 384-90. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2008.07.001.
 Hoskin AW, Ellis L (2015). "Fetal Testosterone iyo Dembiyada: Tijaabada Aragtida Neuroandrogenic Evolutionary". Dambiyada. 53 (1): 54–73. doi:10.1111/1745-9125.12056.
 Bailey AA, Hurd PL (Maarso 2005). "Samiga dhererka farta (2D: 4D) waxay la xiriirtaa gardarrada jireed ee ragga laakiin maaha dumarka". Cilmi-nafsiga nafleyda. 68 (3): 215–22. doi:10.1016/j.biopsycho.2004.05.001.
 Meinhardt U, Mullis PE (Ogosto 2002). "Doorka lagama maarmaanka ah ee aromatase / p450arom". Seminaaro ku saabsan Daawada Taranka. 20 (3): 277-84. doi:10.1055/s-2002-35374. PMID 12428207.
 Waterman MR, Keeney DS (1992). "Genes ku lug leh biosynthesis androgen iyo phenotype lab". Cilmi-baarista Hormoonka. 38 (5–6): 217–21.
 De Loof A (Oktoobar 2006). "Ecdysteroids: steroids-ka galmada ee la iska indho-tiray ee cayayaanka? Ragga: sanduuqa madow”. Sayniska Cayayaanka. 13 (5): 325-338. doi:10.1111/j.1744-7917.2006.00101.x. S2CID 221810929.
 Guerriero G (2009). "Reseptors steroid galmada vertebrate: horumarinta, ligands, iyo neurodistribution." Annals of New York Academy of Sciences. 1163 (1): 154-68.